Fitaovana fanodinana vy mora vidy sy mpamatsy | Ouzhan
Ny vy karbonika dia firaka vy-karbonina miaraka amin'ny atin'ny karbaona 0,0218% ka hatramin'ny 2,11%. Antsoina koa hoe vy vy. Amin'ny ankapobeny, izy io dia misy silikônika, manganese, solifara ary phosforus kely ihany koa. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny habetsahan'ny karbaona vy amin'ny karbaona no mampitombo ny hamafiny ary avo kokoa ny tanjaka, fa ny ambany kosa no mampidina ny plastika. Ny forging vy vy karbonika dia be mpampiasa ary mety amin'ny ampahany mekanika indrindra.
Carbon vy forging-marina vy karbaona forging faritra machining foibe
Ouzhan dia hampanjifa matihanina ny faritra ampiasain'ny milina mifanaraka amin'ny sary sy ny takiana aminao. Ny forging dia fomba fanodinana izay mampiasa milina fanaovana hosoka hampiharana tsindry ny banga vy mba hamoahana déformation plastika hahazoana fametahana amin'ny fananana mekanika sasany, endrika sy habeany. Ny forging (forging and stamping) dia iray amin'ireo singa roa lehibe. Ny famokarana forging dia iray amin'ireo fomba fanodinana lehibe hanomezana faritra banga mekanika amin'ny indostrian'ny famokarana milina. Amin'ny alàlan'ny fisandohana dia tsy ny endrik'ireo faritra mekanika ihany no azo, fa koa ny firafitry ny metaly azo hatsaraina, ary ny toetra mekanika sy ara-batana an'ny vy dia azo hatsaraina. Amin'ny ankapobeny, ny kojakoja mekanika manan-danja indrindra misy fihenjanana ambony sy fitakiana avo lenta dia amboarina amin'ny alàlan'ny famolavolana fomba famokarana. Ny ampahany manan-danja toy ny vatan-kazo turbinina, rotors, impellers, blades, peratra mpiambina, tsanganana fanodinana hydraulic lehibe, varingarina avo lenta, horonan-taratasy fikosoham-bary, crankshafts maotera fandoroana anatiny, tsorakazo fampitaovana, paingotra, bearings, ary artillery ao amin'ny indostrian'ny fiarovana dia vokatra sandoka rehetra.
Ny tombony amin'ny vy vita amin'ny vy
- Hamarino ny fitohizan'ny fandaminana fibre vy
- Manatsara ny toetra ara-batana amin'ny metaly
- Hatsarao ny toetra plastika sy mekanika an'ny metaly
- Kitapo famokarana haingana, fandefasana haingana
OEM namboarina vy vy fananganana serivisy-China Shanghai CNC vy vy forging faritra mpanamboatra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manodina vy vy miaraka amina faritra matevina miorina tsara sy azo itokisana izy io. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena.
Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana sy ny fiasan-tsika mahomby dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vy vita amin'ny vy. Ho fanampin'izay, ny vokatra vy vita amin'ny vy vita amin'ny karbaona dia manome fatratra ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana ho an'ny vokatra vita amin'ny vy vy karbonika ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy izahay.
Ny vy vy karbonina Ouzhan dia manamboatra ampahany amin'ny fanodinana tombony
(1) Ny forging dia mety amin'ny fanodinana ireo faritra mihodinkodina anatiny sy ivelany. Ny elanelan'ny fanodinana fanodinana dia ny zhiIT13 ～ IT6, ary ny sandan'ny Ra eo anelanelan'ny 12.5 ～ 1.6.
(2) Ny fitaovana fihodinana dia manana firafitra tsotra sy fanamboarana mora, izay mety amin'ny fisafidianana fitaovana fitaovana sy zoro geometrika mifanaraka amin'ny fitakiana fanodinana. Mety kokoa koa ny manenjana sy manangona ary manala ireo fitaovana famadihana.
(3) Ny forging dia manana fahaiza-mampifanaraka matanjaka amin'ny firafitra, ara-pitaovana, andiam-pamokarana, sns. Amin'ny workpiece, ary be mpampiasa. Ankoatry ny fanaovana vy isan-karazany, vy vy, ary vy tsy ferrous, dia afaka mamorona vy tsy metaly toy ny fiberglass, bakelite, nylon sns. Ho an'ny metaly sasany tsy ferrous izay tsy mety amin'ny fikosoham-bary, ny fitaovana fanodinana diamondra dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana tsara, izay afaka mahazo ny mari-pahaizana avo lenta sy ny soatoavina bitika kely.
(4) Afa-tsy ny sisin-tany tsy mitovy amin'ny banga, ny ankamaroan'ny fametahana dia fanapahana mitohy miaraka amin'ny fizarana hazo fijaliana mitovy. Noho izany dia miova kely ny hery fanapahana, miorina ny fizotran'ny fanapahana, izay mahatonga ny fanapahana haingam-pandeha sy ny fanapahana mahery vaika ary manana fahombiazan'ny famokarana avo.
Tombony azo avy amin'ny serivisy fanoratana vy vy ouzhan
-Ny vokatra vita amin'ny vy vita amin'ny karbaona vita amin'ny metaly rehetra dia iharan'ny fitsapana avo lenta.
- Ny serivisy OEM express dia afaka miantoka fa mahazo ireo vokatra tadiavina ianao, manohana ny DDP, CIF, FOB ary fomba fitaterana hafa mba hahazoana antoka fa afaka mandray tsara ny entana ny mpanjifa.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ampahany sandoka vy vy.
Previous: OEM Sombin-tsolika hafanana mahery vaika
Manaraka: Namboarina vy vy sandoka namboarina